5 Uninzi Amaziko Old Isixeko Old eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Uninzi Amaziko Old Isixeko Old eYurophu
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 23/01/2021)
Amaziko amadala amadolophu amadala eYurophu ngumzekelo omangalisayo wamandla kwimbali yaseYurophu. Izindlu ezincinci, Iicawe ezinkulu ezinomtsalane kumbindi wesixeko, izigodlo ezigcinwe kakuhle, kunye nezikwere, yongeza kwimilingo yezixeko zaseYurophu. i 5 uninzi lwamaziko amadala amadala edolophu eYurophu ahlala engaguquki kwiinkulungwane ezidlulileyo.
Imibala, bokwakha, kunye namabali ahlala ehlala kwaye emile kuzo zonke izixeko. Ukusuka ePrague ukuya eColmar, Amaziko edolophu aseYurophu akulungele ngokupheleleyo ukutyelelwa kwakho, kwaye ubuncinci impelaveki enye.
1. IZiko lesiXeko sasePrague elidala, Umphakathi waseCzech
Iziko ledolophu elidala elinomtsalane ePrague lihle ngendlela emangalisayo. Isikwere sendawo yedolophu sikhulu kakhulu, ngeebistros ezithandekayo, cafes, kunye nezitali zokutya. Isikwere yindawo efanelekileyo yokubukela abantu, ukungcamla Ibhiya yaseCzech, kunye neesoseji ezikhethiweyo ngelixa ulinde umboniso wewotshi yeenkwenkwezi. Amagqabantshintshi embindi wesixeko esidala, kanjalo, inqaba yeenkwenkwezi. Ungothuki xa ubona izihlwele zabakhenkethi zihlanganisene kwisikwere iyure nganye ejikelezayo.
Indawo ekhethekileyo yeziko elidala elinomtsalane ePrague zizakhiwo ezintle ezinemibala. Uhlobo lweBaroque Icawa iSt. UNicholas kunye necawa ye-gothic yenkulungwane ye-14 yeLady yethu ngaphambi kweTyn, ungaphoswa. Iziko lesixeko elidala ePrague kulapho Imarike yeKrisimesi yenzeka, kwaye iziko elinomtsalane lesixeko liguqula libe yintsomi emangazayo.
Iziko ledolophu elidala elinomtsalane eSalzburg lihle ngokukhethekileyo kwaye lahlukile. Umxube wezakhiwo zase-Italiya naseJamani, Ubudala obuphakathi ukuya kwisitayile senkulungwane ye-19, Yenza elinye lamaziko esixeko athandekayo eYurophu. Salzburg, ikwabizwa ngokuba yiAltstadt UNESCO zamagugu site kunye uhambo oluhle losuku oluvela eVienna, lula ngololiwe.
Intliziyo yeziko lesixeko esidala eSalzburg likhaya lakudala lenkosana, Imeko yaseResidenz 180 amagumbi. Isikwere seResidenz kulapho ungonwabela intengiso entle yeKrisimesi yeZalsburg, kunye neekonsathi zomculo. kwakhona, qiniseka ukuzula ujikeleze umbindi wedolophu yakudala, kwi Residenz umthombo, Ikhaya labantwana likaMozart, kunye neSalzburg Cathedral.
ISalzburg imi kumantla eAlpes, kunye neentshaba, kunye ne-domes ngasemva. Umlambo uwela enye yeedolophu ezindala ezigcinwe kakuhle eYurophu ukongeza ukubonwa kwamakhadi eposi.
3. Iziko elidala lesixeko saseBruges, Bheljiyam
Ibrugge, okanye njengoko sonke siyazi ukuba yiBruges, sesinye isixeko esihle esinomtsalane kumbindi wesixeko. Xa sele likhaya leViking, namhlanje kunjalo enye yeempawu ezifihliweyo zaseYurophu. wasebenzisa’ iindlela ezimxinwa kunye izitalato zenziwe ngamatye agranyagranya, amakhaya abebala, kunye nemijelo iyenza ibe lilifa lemveli le-UNESCO.
Xa ujikeleza iziko ledolophu endala eBruges, uya kuqaphela iivenkile ezincinci ezinikezela ngentambo entle. wasebenzisa’ Ileyisi idume kwihlabathi liphela, ke ukongeza ekuziseni imifanekiso emihle, Ileyisi iya kuba sisikhumbuzo esihle ongeza nayo kwiBruges.
IiBruges zifikeleleka ngothutho loluntu oluvela eBrussels, kwaye ungasihlola isixeko ngenqwelomoya, kunyawo, okanye ride umkhumbi. IMarkt yindawo entle yokuqala uhambo lwakho ukutyhubela iminyaka, kwaye uqhubeke kwiBelfry ephawulekayo yeBruges, kunye neCawa leLady Lady Bruges. Ukuba ufuna ukuncoma iziko ledolophu elidala elinomtsalane ukusuka phezulu, emva koko inqaba yaseBelfry ibonelela ngeembono ezizodwa.
4. Imibala, Fransi
Iziko elidala elinomtsalane kwidolophu yaseColmar yenye yezona ndawo zintle ukutyelela eAlsace. Iziko lesixeko elidala lelinye lawona mazwe amadala agcinwe eYurophu. Izindlu’ ii-facade zigcine i-postcard-efana nomtsalane kunye nobuhle kumaxesha aphakathi, kwaye unokubona izinto zakuqala zobuNtshatsheli kubugcisa bokwakha.
IColmar ijikelezwe zizidiliya, kunye nakumaziko amadala edolophu, uyakufumana icawe entle iSaint-Martin. Enye into ongaphoswa yiyo yiVenice encinci eColmar, apho uya kufumana iindawo zokutyela ezithandekayo, imizila, kunye nemijelo yokuhlola.
Zininzi iindlela zokuhlala kwidolophu encinci yaseColmar, kodwa ungonwabela iziko ledolophu yakudala eColmar, on a day-trip from Strasburg. The wonderful vineyards are the perfect excuse for a French Ukuqhekeka kwesixeko yaye impelaveki ibalekile.
Amaxabiso eParis aya eColmar
I-Zurich ukuya kumaxabiso oololiwe eColmar
Stuttgart ukuya kumaxabiso oololiwe eColmar
5. IZiko lesiXeko saseFlorence, ElamaTaliyane
UDuomo waseFlorence, nenqaba yayo kunye neCathhedral, lawula iziko ledolophu yakudala eFlorence ngomtsalane, ubukhulu, nobuhle. Iziko ledolophu yakudala eFlorence yenye ye 5 Eyona nto inomtsalane kwaye intle ngokumangalisayo eYurophu. Indawo yakho yokuqala kule ndawo yelifa lemveli le-UNESCO iqala ePiazza del Duomo ukuya ePiazza Della Signoria.
Ukuba unomdla wokufumanisa ngakumbi ngeFlorence, ke kuya kufuneka uqhubeke ne-Uffizi Gallery kunye neBoboli Gardens. Akukho ndlela ingcono yokufunda ngembali kunye nenkcubeko yesixeko kwiinkulungwane ezidlulileyo kunokuba kubugcisa. UFlorence sisixeko esihle sase-Itali, apho ungabamba khona ipanini, kanye ngaphandle kweDuomo. Ukuba unexesha, emva koko unyukele phezulu kwiDuomo, for breathtaking iimboniselo kwesona sixeko sihle e-Itali.
Iziko lesixeko esidala saseFlorence uhambo losuku ukusuka eVenice. kunjalo, kuya kufuneka unikezele ubuncinci 2 Iintsuku ezipheleleyo zokuhlola iisayithi kunye neempawu zeFlorence.
Ukuba ufuna ukubuyela emva ngexesha lamaxesha aphakathi kunye noRenaissance, emva koko ezi 5 Amaziko edolophu yakudala eYurophu yindlela efanelekileyo yohambo. Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo lwakho ukuya kula maziko emnandi kakhulu endala ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "AmaZiko amaXesha amaXabiso aDala aseYurophu eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-old-city-centers-europe%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
citycenter Fairytaletowns oldcitycenter OldcitycentersEurope train Travel TravelColmar ukuhamba-hamba UkutyaPrague TravelSalzburg